शेखर, चन्द्र र मीनबहादुरको एउटै स्वर– लगानी प्रक्रिया सहज भए नेपालमा कायापलट हुन्छ - दैनिकी मिडिया
शेखर, चन्द्र र मीनबहादुरको एउटै स्वर– लगानी प्रक्रिया सहज भए नेपालमा कायापलट हुन्छ
११ पुष २०७६, शुक्रबार ०४:४९
११ पुस, । चन्द्रागिरि हिल्सका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सातै प्रदेशमा केबलकार बनाउने योजनामा छन् । गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपालका गाउँ–गाउँसम्म कृषिमा हिमालय ब्राण्ड स्थापित गर्न चाहन्छन् । भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङलाई १७ वटामात्रै होइन, नेपालका थप सहरमा भाटभटेनी सुपरमार्केट खोल्ने सपना जागेको छ ।
उनीहरूलाई लाग्छ, यसरी नै सबै लगानीकर्ताहरू जाग्ने हो भने १५ वर्षभित्रै नेपाललाई कायापलट गर्न सकिन्छ । त्यसो भए नेपालमा आद्योगिक तथा व्यावसायिक ब्राण्ड स्थापित गरिसकेका यी उद्यमीलाई लगानी विस्तार गर्न के कुराले रोकेको छ त ?
यो प्रश्नमा उनीहरूको एउटै स्वर छ– नेपालमा लगानी गर्ने उत्साहजनक वातावरण नै छैन । लगानी गर्न सरकारी प्रक्रिया यति जटिल छ, काम सम्पन्न गर्ने समयभन्दा प्रक्रिया पूरा गर्न बढी समय लाग्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको पार्टनरका रूपमा हेर्दैन ।’
नेपालमै उद्योग र व्यावसायिक सफलता हात पारेर ब्राण्ड स्थापित गरेका ३ घराना । गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ ।
सानो लगानी र थोरै पुँजीबाट व्यावसायिक जीवन सुरु गरेका यी उद्यमीले कसरी यत्रो सफलता हात पारे ? अहिले नेपालमा लगानीको अवसर र सम्भावना कस्तो छ ? कुन ठाउँमा लगानीको योजना बनाउँदै छन् ? यी ३ उद्यमीले संवाद गरे । सन्दर्भ थियो, ‘उज्यालो बागलुङ, समृद्ध बागलुङ ।’
बागलुङ महोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघले नेपाली उद्यममा ब्राण्ड बनेका ३ जना उद्यमी एउटै मञ्चमा राखेर संवाद गराएको हो । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक तथा लगानी नीतिका विषयमा अर्का वक्ता थिए, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ । सहजीकरणमा थिए, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन ।
केन्द्रमा बागलुङमा लगानीको अवसर र सम्भावनाको विषय थियो । तर, बागलुङले पनि समग्र नेपालकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले बहसको जोड लगानीको वातावरण र प्रतिफलतिरै केन्द्रित भयो ।
गोल्छाले हजुरबुवाले दुःख गरेर सुरु गरेको व्यवसायको विरासत सम्झे । व्यावसायिक परिवारको विरासतलाई अझ विस्तार गर्दै थप ब्रान्ड स्थापित गर्दै नेपाल सरकारपछि धेरै रोजगारी दिने कम्पनीसमेत बनेको गोल्छाले बताए ।
ढकालले बागलुङबाट ३ हजार ५ सय रूपैयाँ बोकेर काठमाडौं छिरेर अहिले यो ठाउँमा आइपुगेको बताए । खोटाङको किसान परिवारमा जन्मेका गुरुङले ३५ हजारमा सुरु गरेको भाटभटेनीमा अब ५० हजारलाई रोजगारी दिने सपना बोकेर हिँडेको सुनाए ।
नेपालमा सरकारी जटिल नीति, जग्गा प्राप्तिको समस्या र लगानीको प्रतिफल आउने ग्यारेन्टी अझै हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सातै प्रदेशमा केबलकार बनाउने योजना बुनेका ढकालले बागलुङसँगै गण्डकी प्रदेशको सिग्लेस कोरी र नवलपुरको मौलाकालीमा पनि केबलकार बनाउने योजनामा रहेको सुनाए । तर, सरकारी प्रक्रिया जटिल भएकाले समस्या पारेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारी प्रक्रिया सहज बनाइदिनुस् । १८ महिनामा मौलाकालीमा केबलकार सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ ढकालले भने, ‘त्यति नै समयमा कास्की सिक्लेसको कोरीमा केबलकार बनाउँछौं । राज्यले वातावरण त बनाइदिनु पर्‍यो नि ।’
चन्द्रागिरिमा केबलकार बनाउने काम २ वर्षमा सकिएको तर लगानीको प्रक्रिया पूरा गर्नै ५ वर्ष लागेको ढकालले बताए ।
नेपालमा लगानीका निम्ति पहिलेभन्दा वातावरण बनेको भए पनि अझै उत्साहजनक नरहेको उनको भनाइ थियो ।गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ पनि उस्तै छ । सरकारी मेकानिजम सहज हुने हो भने १५ वर्षभित्रै देश कायापलट गर्न सकिने गोल्छा बताउँछन् । ‘हाम्रा नेताले भनेझैं देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ । हाम्रो सरकारी संयन्त्र पुरानो भयो । लगानी बढाउन सरकारी नीति सहज हुनुपर्‍यो’, गोल्छाले भने, ‘हामी बागलुङका गाउँठाउँमा पनि ब्राण्ड विस्तार गर्न तयार छौं ।’
भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ नेपालमा व्यवसाय गर्न फलामको चिउरा चपाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बागलुङजस्ता ठाउँमात्रै होइन । संसारभर भाटभटेनी पुर्‍याउँछु भन्ने लक्ष्य लिएर हिँडेको छु’, गुरुङले अगाडि भने, ‘नेपालमा व्यवसायीलाई लगानी गर्नै गाह्रो छ ।’
सहजकर्ता शेरचन र ग्लोबल आइएमी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका ढकाल बागलुङमै जन्मेका हुन् र सहजकर्ता बागलुङमै लगानी भित्राउनेबारेमै जोड दिन्छन् । ३ वर्षभित्र बागलुङमा लगानी भित्राउन सक्ने सम्भावनाबारे ३ जनालाई शेरचनले जिज्ञासा राखे ।
ढकालले बागलुङमा केही न केही गर्न आतुर रहेको र प्रतिफलको ग्यारेन्टी भए छिट्टै लगानी भित्राउने बताए ।
गोल्छा समूहका शेखरले बागलुङमा ठूलो अर्गानिक उत्पादन हुन सक्छ भने आफ्नो ब्रान्ड ल्याउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । सरकारले जग्गा मिलाइदिने हो भने १० महिनाभित्र बागलुङमा भाटभटेनी खोल्ने गुरुङले बताए ।
जुनसुकै लगानीकर्ता पनि प्रतिफलको ग्यारेन्टी हेरेरमात्र आउने ढकालको भनाइ थियो । लगानी भित्राउनेसम्बन्धी सरकारको मेकानिजम साह्रै पुरानो र थोत्रो भइसकेको ढकालले गुनासो गरे । सरकारी मेकानिजमले निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको पार्टनर सम्झन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा लगानीको सम्भावना र चुनौती दुवै रहेको बताए । घाटा खानका लागि कुनै पनि लगानीकर्ता लगानी गर्न नआउने बताउँदै गोल्छाले चुनौती चिरेर अवसर र सम्भावना लेखाउने काम सरकारको भएको बताए ।
सरकारले नीति बनाउने र त्यही नीतिअनुसार लगानी गर्ने काम व्यवसायीको भएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । समृद्ध नेपाल निर्माणका निम्ति निजी क्षेत्र साझेदार भएको बताउँदै गुरुङले जग्गा प्राप्तिदेखि राज्यका कारण जटिलता उत्पन्न छन् भने हटाउन गण्डकी प्रदेश तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । भूमिनीति बनिरहेको र त्यसपछि लगानीका निम्ति जग्गा प्राप्ति सहज हुने गुरुङको भनाइ थियो ।
‘समृद्ध नेपालका निम्ति समृद्ध अर्थतन्त्र चाहिन्छ । समृद्ध अर्थतन्त्रका निम्ति पुँजी निर्माण हुनुपर्छ । व्यवसाय र उद्यमबाट त्यो पुँजी निर्माण हुन्छ, उत्पादनसँग गाँसिएरमात्रै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ’, अर्थमन्त्री गुरूङले भने, ‘उद्यमीले लगानी गर्नुस्, हामी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौं ।’
बलिका लागि बिहारका बाबाले मगाएका थिए नेपाली युवती